Pakistan: 11 dead in luxury hotel bombing |
Location: musha » Kutumira » Newsletter » Pakistan: 11 vakafa muhotera yepamusoro yehotera
Pakistan: 11 vakafa muhotera yepamusoro yehotera
PESHAWAR, Pakistan - Vanozviuraya vapfura varindi ndokutanga kuputika neChipiri kunze kwehotera yepamusoro apo vekunze nevanoziva vePakistan vakasangana, vachiuraya vanhu vangangosvika gumi nerimwe.
PESHAWAR, Pakistan - Vanozviuraya vakapfura nzira vachipfuura varindi ndokutanga kuputika neChipiri kunze kwehotera yepamusoro apo vekunze nevakanaka vekuPakistan vakavhengana, vachiuraya vanhu vangangosvika gumi nemumwe uye vakakuvadza makumi manomwe, vatungamiriri vakati.
Iwo mabhomba akarova Pearl Continental Hotel kuma10 manheru, apo husiku hupenyu hwaive huchiri kufamba. Kurwiswa uku kwakadzora chikamu chehotera kuita marara ekongiri uye simbi yakamonyoroka ndokusiya crater hombe munzvimbo yekupaka.
Kuputika uku kwakauya svondo mushure mekunge vatungamiriri veTaliban vayambira kuti vaizoita kurwisa kukuru mumaguta makuru vachitsiva zvemauto anorwisa kutora nzvimbo iri pedyo yeSwat Valley kubva kumauto. Hapana chirevo chakaonekwa nekukasira kwebhomba muPeshawar, iro guta guru kuchamhembe kwakadziva kumadokero rine vanhu vangangosvika mamirioni e2.2.
Pakutanga kwezuva, vakuru vakuru vakati mauto ePakistan akabata varwi pamativi maviri kumwe kuchamhembe kwakadziva kumadokero. Mauto akatumira zvikepe zveherikoputa kutsigira vagari vachirwisa maTaliban mune rimwe dunhu uye vakashandisa pfuti kurwisa varwi mune imwe mushure mekunge vanonzwira tsitsi vakuru vedzinza vakaramba kuvapa.
Hapana oparesheni yaive chero padhuze nehukuru hwemauto anotsamwisa muSwat Valley, uko mauto zviuru gumi nezvishanu akarwira vanosvika zviuru zvisere zvevarwi veTaliban.
Asi hondo dzeMuvhuro neChipiri mudunhu reUpper Dir neBannu dzinoratidza kuti homwe dzevatsigiri veTaliban dzinoramba dzakasimba mune dzimwe nzvimbo, nepo chimiro chevapanduki cheIslam yakaoma hachifadze mune dzimwe - kunyanya nekuda kwechisimba icho varwi vakashandisa simbisai.
Peshawar iri pakati pematunhu maviri. Pearl Continental, inodaidzwa kunzi "PC" nevaPakistani, inotarisa gorofu uye nhare yenhoroondo. Ihotera yakasarudzika muguta, inochengetedzwa zvakanaka uye yakagadzikwa kure kure nemugwagwa mukuru.
Mupurisa Liaqat Ali akati vafakazi vakapa nhoroondo dzakajeka dzekuti vapomeri vakaita sei kurwisa kwavo.
Varume vatatu vaive mumotokari yekutakura vakasvika pagedhi hombe rehotera, vakavhura pfuti kuvarindi, vakapinda mukati uye vakaputisa bhomba padyo nechivako, Ali akadaro. Mumwe mukuru wemapurisa, Shafqatullah Malik, akafungidzira kuti yaive neinopfuura hafu yetani yezviputi.
Chiitiko chisina kugadzikana chakaratidza kubhomba gore rapfuura kuIslamabad's Marriott Hotel iyo yakauraya vanhu vanopfuura makumi mashanu. Mahotera ese ari maviri aive anofarirwa nzvimbo dzevatorwa uye vepamusoro maPakistani kuti vagare nekushamwaridzana, zvichivaita zvinzvimbo zvepamusoro zvevarwi zvisinei nekuchengetedzeka.
Maitiro ekurwisa aya akaenzana nekurwiswa kwakaitwa Chivabvu 27 pazvivakwa zvemapurisa uye nemuzinda wedunhu rePakistan revatungamiriri vehungwaru kumabvazuva kweguta reLahore, iro maTaliban aiti ndiro basa. Boka diki rakavhura pfuti kune vanochengetedza kuti vapfuure neposvo, ndokuzoputika kombi yakatakura zvakaputika.
MuWashington, vakuru vakuru vaviri veUS vakati Dhipatimendi reHurumende ranga richikurukura nevaridzi vehotera kuti vatenge kana kusaina rendi yekugara kunzvimbo iyi kuti vagare mumiriri mutsva weAmerica muPeshawar. Vakuru vacho vakati havana ruzivo rwechiratidzo chekuti US kufarira mukomboni iyi kwakabatsira pakuitiswa kwayo.
Vakuru ava vakataura vasina kuda kudomwa zita nekuti kutaurirana kwanga kusiri pachena uye kwanga kusati kwapera. Vati hapana danho raive ratorwa kare kuti zvienderere mberi here nehurongwa hwekumisikidza mumahofisi ehotera.
Lou Fintor, mutauriri weAmerican Embassy muIslamabad, akati pakange pasina zvirevo zvekukuvara kweAmerica.
Gurukota rezveNhau reNorth West Frontier Mian Iftikhar Hussain akaudza The Associated Press kutanga kweChitatu kuti vakuru vakuru vaitaura nezvevanhu gumi nevanomwe vakafa. Mamwe mapurisa nevakuru vehurumende vaigona kungosimbisa vashanu chete vakafa.
UN yakaratidza mushandi semumwe wevakafa: Aleksandar Vorkapic, 44, nyanzvi yezve tekinoroji yeruzivo kubva kuBelgrade, Serbia, aive chikamu chechikwata chekukurumidzira kubva kuhofisi yeUN High Commissioner weVapoteri vari kubatsira padambudziko iri.
Peshawar wedunhu rekufambiswa kwemabasa Sahibzada Anis akati kuputika uku kwakakuvadza vamwe vatatu vaishandira agency yeUN - Briton, Somali neGerman.
Amjad Jamal, mutauriri weWorld Food Program muPakistan, akati vashandi vanopfuura makumi maviri nemashanu veUN vari kugara muhotera iyi. Vati vese vanomwe vashandi veWFP vakachengeteka.
Munyori Mukuru weUN Ban Ki-moon akashora "kurwisa kwakaipisisa kwemagandanga" "nenzira dzakasimba," akadaro mutauriri wemubatanidzwa weUN Marie Okabe kumuzinda weUN muNew York.
"Zvakare, mushandi akazvipira weUnited Nations ari pakati pevakarwiswa zvakaipisisa nemagandanga izvo zvisina chikonzero chingaruramisa," akadaro Okabe.
Vati Ban "akarwadziwa nenhamba huru yevakafa uye vakakuvara" uye anotumirawo runyararo kumhuri dzevakauraiwa uye kuhurumende nevanhu vePakistan.
Dr. Khizar Hayat kuLady Reading Hospital vakati chipatara ichi chakagamuchira vanhu makumi manomwe vakakuvadzwa, pamwe nevapfumbamwe vari mumamiriro ezvinhu akaipisisa.
Farahnaz Ispahani, mutauriri weMutungamiri Asif Ali Zardari nebato riri kutonga, vashora varwisi.
"Hatisi kuzotya nevanhu ava," akadaro. “Tichavadzura, ticharwa navo uye tichakunda. "Kubatana nekuvimbika kwePakistan kuri panjodzi."
Kurwiswa kwemauto muSwat nematunhu akapoteredza kwakatanga mukupera kwaApril, uye vakuru vakuru vakapomera mashoma ekurwisa kuzviuraya kuTaliban kuyedza kutsiva.
Vakuru veUS vangade kuti Pakistan itange chirongwa munzvimbo yepedyo yeSouth Waziristan, nzvimbo huru yemukuru wePakistani Taliban Baitullah Mehsud. Hurumende yazivisa kuti haina hurongwa hwekurwisa nzvimbo iyi, uko varwi veAl-Qaida vanofungidzirwa kuti vari kushanda.
Chirongwa chitsva chakatanga neChipiri muJani Khel, dunhu rine masimba muBannu riri pamuganhu weNorth Waziristan, imwe nhare yeTaliban, mushure mekunge hurumende yaisa mutemo wekusvika pamba nguva isingazivikanwe, akadaro Kamran Zeb Khan, mukuru wekubatanidza mudunhu reBannu.
Akawedzera kuti chirongwa ichi, chakatsigirwa nezvombo zvehondo, chakatangwa mushure mekunge vakuru vedzinza vatadza kusangana nemusi weMuvhuro wekudzinga kana kupa varwi vanofungidzirwa kuti ndivo vakapara vanhu vakawanda svondo rapfuura revadzidzi vakazoburitswa.
Mauto ePakistan aisazosimbisa kuti chero mashandiro akatanga.
Kumwe kurwa kwakaitika padhuze neSwat Valley mudunhu reUpper Dir, uko kwaisvika mahegi eherikoputa kuzotsigira varwi vevagari vemo vachirwira varwi veTaliban mazana maviri.
Mauto, anonzi lashkar, akasimuka mukupera kwesvondo kutsiva bhomba rekuzviuraya iro rakauraya vanhu makumi matatu nematatu pamusikiti. Vakuru vanoti VaTaliban vakaita bhomba nekuti madzinza emuno akaramba kupinda munzvimbo iyi.
“MuUpper Dir, sezvauri kuona, lashkar yamuka, vanhu vasimuka. Kana Mwari achida, mamiriro ezvinhu achachinja ipapo, ”akadaro paramende Najmuddin Malik paakashanyira musasa wevapoteri muPeshawar.
Huwandu hwemauto hwakakwira kusvika pakudarika zviuru zviviri, vagari vemumisha miviri nedhorobha vachijoinha navo Chipiri sezvo vakakomba maTaliban munzvimbo yakaoma, akadaro mapurisa emunharaunda Atlas Khan. Chirevo chake hachikwanisi kusimbiswa zvakasununguka nekuti midhiya inosvika munzvimbo yekukonana yanga ichingobvumidzwa kumajuneti anoperekedzwa nemauto.
Mumwe mukuru wedzinza akati vagari vemumusha havazoendi kumba kudzamara varwi vaenda - neimwe nzira.
"Tiri kunze kwekutumwa kuuraya kana kuburitsa maTaliban ese," Malik Motabar Khan akaudza AP nhare kubva kumusha weGhazi Gay. "Tichagara pano kusvikira tavaponda vese."
Associated Press Ban Ki-moon Mwari hotera ChiIslram Pakisitani Taliban United Nations
Kubiwa. Zvinodhaka zvehondo. Nguruve flu. Acapulco pfuti. Saka, kuenda kuMexico kwakachengeteka zvakadii?
ACE Aviation Holdings Inc: Air Canada ichapona